यसकारण हिन्दू राष्ट्र हुनैपर्छ
यसकारण हिन्दू राष्ट्र हुनैपर्छ हिन्दू धर्ममाथि धेरै ठूलो प्रभाव पार्ने षड्यन्त्र जारी
मधेश दर्पण मंगलबार, मंसिर २१, २०७८
निलम कुमारी महतो
नेपालमा हिन्दूवादी संघसंस्थाहरु त धेरै खुलेका छन्, उनीहरुले काम पनि आफ्नो स्तरबाट गरिरहेका छन् । तर नेपाल विश्व हिन्दू महासंघ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । विभिन्न १२ वटा देशहरुमा यो महासंघ फैलिएको छ । हाम्रो काम गर्ने शैली अन्यभन्दा फरक छ । हामीले हिन्दूत्व जगाउनका लागि शहरकेन्द्रित मात्रै नभई गाउँ–गाउँ, टोल–टोलमा गएर आमजनताका बीचमा जनचेतना जगाइरहेका छौं ।
नेपाल हिन्दूराष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्ष हुँदा हिन्दू धर्मावलम्बीहरु कसरी अल्पसंख्यक हुँदैछन्, ज्यादती लगायतका विषयमा जनतालाई बुझाइरहेका छौं । धर्मनिरपेक्ष हुँदा नेपालका अतिविपन्न र दलित समुदायहरु बढी मारमा परेका छन् । कतिपय विपन्न हिन्दू समुदायका छोराछोरीहरुलाई आफ्नो धर्म के हो, कसरी बचाउने पनि थाहा नभएको हामीले पायौं ।
नेपाल विश्व हिन्दू महासंघ मार्फत् हामीले गाउँ–गाउँमा गएर जनजागरण फैलाइरहेका छौं । पहाडभन्दा बढी मधेशमा हिन्दूहरुमाथि दमन भइरहेको छ । केही दिन पहिला काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा केही मानिसहरुले गाईको मासु खान पाउनुपर्छ भन्ने पोष्टर लिएर प्रदर्शन गरेका थिए । के हामीले गाईको मासु खान दिनुपर्छ त ? गाई हाम्रो राष्ट्रिय जनावर हो । गाईलाई हामी आमा र भगवानसरह पूजा गर्छौं । गाईको मासु खानुपर्छ भनेर प्रदर्शन गरिरहँदा हाम्रो देशको कानून, प्रशासन र सरकार कहाँ थियो ? किन तिनीहरुमाथि कारबाही भएन ? हामीले गाईलाई आमा मानेका छौं, त्यसलाई काटेर खानुपर्छ भन्नु हाम्रो आस्थामाथि प्रहार होइन र । तिनीहरु राष्ट्रघाती काम गरेका छन् ।
यसमा हाम्रो सरकार, प्रशासन र कानून किन मौन छ, यो ठूलो रहस्यको कुरा हो । निश्चितरुपमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष हुँदा हिन्दू धर्मावलम्बीहरुमाथि दिनप्रति दिन विभिन्न प्रकारले प्रहार हुँदै आएको छ । नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू छन्, झण्डै ९६ प्रतिशत ओमकार परिवारसहित छन् । हामी बहुसंख्यक हुँदा पनि हामीमाथि दमन भइरहेको छ ।
अस्ति भर्खरकै घटना हेर्नुस्, धनुषा जिल्लाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२० देवपुरा रुपैठामा हिन्दूहरु छठ पर्व मनाउने क्रममा मुस्लिम समुदायका केही व्यक्तिहरु अराजकता फैलाउन खोजे । त्यहाँ सार्वजनिक स्थलमा सबै धर्म समुदायका व्यक्तिले आआफ्नो पर्व मनाउने गरेका छन् । त्यसमा कुनै रोकटोक हुँदैन । तर हिन्दूहरुले छठ पर्व मनाउन खोज्दा त्यो ठाउँमा इस्लामिक झण्डा झुण्ड्याइयो । यो कतिको जायज हो त ? धर्ममाथि हाम्रो आस्था छ र हाम्रो आस्थामाथि कसैले खेलवाड गर्न दिनु हुँदैन । हाम्रो आस्थामाथिको आक्रमण असह्य हुन्छ । हाम्रो धर्म संस्कृतिसँग खेल्नेलाई हामीले कदापि क्षमा गर्ने छैनौं ।
सत्य सनातन हिन्दू धर्मले आजसम्म कुनै पनि अन्य धर्मावलम्बीहरु मुस्लिम, क्रिष्चियन, बौद्ध लगायतको विरोध गरेको छैन । तर हाम्रो हिन्दू धर्ममाथि प्रहार हुनुको एउटै कारण हो फोहोरी राजनीतिक खेल । केही यहाँ षड्यन्त्रकारी राजनीतिक पात्रहरु छन् जसले गर्दा बेला–बेलामा हिन्दूले मारमा परिरहेका छन् । विश्वभरिमै एउटै हिन्दू राष्ट्र नेपाल थियो । यो भनेको हाम्रो गौरव र हाम्रो पहिचान थियो ।
सत्य सनातन हिन्दू धर्मले आजसम्म कुनै पनि अन्य धर्मावलम्बीहरु मुस्लिम, क्रिष्चियन, बौद्ध लगायतको विरोध गरेको छैन । तर हाम्रो हिन्दू धर्ममाथि प्रहार हुनुको एउटै कारण हो फोहोरी राजनीतिक खेल । केही यहाँ षड्यन्त्रकारी राजनीतिक पात्रहरु छन् जसले गर्दा बेला–बेलामा हिन्दूले मारमा परिरहेका छन् । विश्वभरिमै एउटै हिन्दू राष्ट्र नेपाल थियो । यो भनेको हाम्रो गौरव र हाम्रो पहिचान थियो । त्यो पहिचान अहिले हामीले गुमाएका छौं । राजनीतिक पार्टीका केही नेताहरु आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि हामीसँग हाम्रो गौरव र पहिचान खोसेका छन् ।
ती पात्रहरुले हाम्रो धर्म, संस्कृतिसँग खेल्ने प्रयास गरेका छन् । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय दमनकारीहरुको नै हात रहेको छ । होइन भने रातारात बिना कुनै कारण विश्वको एक मात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष किन बनाइयो ? गैरहिन्दू राष्ट्रहरुको चाहनामा हाम्रा नेताहरु लोभमा परेर जबरजस्ती धर्मनिरपेक्षता लादियो । अस्ति भर्खरै हामीले मधेशी आयोगमा विदेशी षड्यन्त्रकारीहरुलाई हे¥यौं । तिनीहरुले सहकार्य गरेर जाने भनेर गरेको कुरा हामीसँग रेकर्ड छ । हामीले उनीहरुसँग किन सहकार्य गर्ने ? त्यस्तै, मुस्लिम आयोगमा पनि षड्यन्त्रकारीहरु किन आउँछन् ?
अल्पसंख्यक मुस्लिमहरुलाई हिंसा र अशान्ति मचाउनका लागि तिनीहरु नेपालको संवैधानिक अंगहरुमा पसिरहेका छन् । हामीले हिन्दू–मुस्लिम भाई–भाई, भाइचारको सम्बन्ध राखेका छौं । तर मुस्लिमहरु हामीमाथि निरन्तर दमन गरिरहेका छन् । प्रदेश २ को सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउत गद्दीले नै सामुदायिक भेदभाव गरिरहनुभएको छ । मुख्यमन्त्रीले आफ्नो बजेटमा हिन्दूका मठमन्दिरका लागि तीन करोड बजेट छुट्याउनुभएको छ भने मुस्लिम समुदायका लागि १८ करोड किन छुट्याएको छ त ? किन मदरसा विधेयक ल्याएको छ ? नेपालमा मुस्लिम आयोग छ, हिन्दू आयोग किन छैन ?
त्यसैले हिन्दूमाथि ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको छ । अब हामी दमन सहन सक्दैनौं । हामी षड्यन्त्रकारीहरुको प्रयासलाई सफल हुन दिँदैनौं । नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र घोषणाका लागि अब सडकमा विद्रोहको तयारी गरिरहेका छौं । नेपाल विश्व हिन्दू महासंघको मात्रै होइन, प्रत्येक हिन्दूको चाहना हो नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ । जनमत संग्रह गराइयो भने त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि नेपालीहरु के चाहन्छन् । यदि हिन्दू राष्ट्रका लागि जनमत संग्रह भयो भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले नेपाल पुनः हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा मत दिनेछन् ।
यो जनगणनामा पनि धेरै ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको छ । अहिले जनगणनामा खटिएका गणकहरुलाई हेर्ने हो भने जसलाई जनगणना के हो, कसरी तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ लगायत आधारभूत कुराहरु नै थाहा छैन । एउटा ज्वलन्त उदाहरणका लागि हेरौं, सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो हेरेको थिएँ कि जनगणना गर्न आउने गणकलाई एउटी महिलाले भनिरहेकी थिइन् कि मेरो भाषा संस्कृत हो, तर पनि गणकले नेपाली लेखेका छन् । यसको प्रमाण पनि छ मसँग ।
यो षड्यन्त्र भइरहेको छ । एउटा ठूलो षड्यन्त्रका रुपमा हेरौं कि नेपाल सरकारले भनिसकेको छ कि यो जनगणनामा निलो रंगको कलमले जनगणना गर्ने । तर गाउँ–गाउँमा गणकहरुले शिशा कलमले लेखिरहेका छन् । किन ? यसमा ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको छ । गाउँ–गाउँमा गएर शिशा कलमले लेख्ने र त्यसलाई पछि मेटाएर आफ्नो तरिकाले लेख्ने षड्यान्त्रको हो । यो हिन्दू धर्ममाथि धेरै ठूलो प्रभाव पार्ने षड्यन्त्र हो ।
राजा आए पनि स्वीकार्छौं र अन्य व्यवस्था भएपनि स्वीकार्छौं । तर नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ । व्यवस्था जेसुकै होस्, शासन जसले गरोस् तर हाम्रो मूल एजेन्डा नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुप¥यो । त्योबाहेक हाम्रो अन्य कुनै एजेण्डा छैन । अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरुले पनि हिन्दूराष्ट्रलाई उठाइरहेका छन् । यसको पछाडि पनि ती राजनीतिक दलका नेताहरुको स्वार्थ लुकेको देखिन्छ ।
अहिले विभिन्न चुनावहरु नजिकिँदै गएको छ । चुनावलाई मध्यनजर गरेर नै ती नेताहरुले हिन्दूराष्ट्रको एजेन्डा बोकिरहेका छन् । किनभने नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा हिन्दूहरु छन् । हिन्दूहरुको मतबिना कुनै पनि नेताले जित्न सक्दैन । त्यसैले यो चुनावी रणनीति मात्रै हो, उनीहरु सत्तामा आउनका लागि यो कुरा उठाइरहेका छन् ।
राजा नै चाहिन्छ भन्ने हाम्रो एजेण्डा होइन । यहाँ धेरै राजावादीहरु छन्, उनीहरु पुनः राजसंस्था होस् भन्ने चाहिरहेका छन् । त्यसैले यो मुद्दा उठाइरहेका होलान् । हामीलाई शासन व्यवस्था वा कसको सत्ता भन्ने कुरासँग मतलब छैन । हाम्रो पहिचान कायम गर्न जसले हिन्दू राष्ट्र कायम गराउँछ त्यसलाई हामी स्वागत गर्न तयार छौं । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर २१, २०७८, १२:५०:००